Mahjong. 🥇 Faka futhi ujabulele kusuka ku-Emulator.online
Mahjong. IMahJong ngumdlalo wezobunhloli odinga ukugxila okuningi, ukuhlakanipha nokuqonda. Funda ukudlala uMah Jong, wenze inhlanganisela engcono kakhulu futhi ube ngumnqobi omkhulu.
Mahjong: Ungadlala Kanjani Isinyathelo Ngesinyathelo 🙂
Ukudlala Mahjong online mahhala, kufanele nje landela le miyalo igxathu negxathu:
I-Paso 2. Ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi, umdlalo uzovele uboniswe esikrinini. Kufanele kuphela hit play futhi manje usungaqala ukudlala izingcezu ezifanayo ukuziqeda.
Isinyathelo se-3. Nazi izinkinobho ezithile eziwusizo. Can "Faka noma susa umsindo", shaya inkinobho"Play"bese uqala ukudlala, unga"Misa kancane"bese uyiyeka, buza"usizo"noma"Qala kabusha"noma kunini.
Isinyathelo se-4. Susa wonke amabhangqa uze uphele umdlalo, bekhumbula njalo imithetho yomdlalo. Ekugcineni, uzokwazi ukubhalisa igama lakho futhi yabelana ngayo ekuxhumaneni nomphakathi uma usuqedile umdlalo.
Isinyathelo se-5. Ngemuva kokuqeda umdlalo, chofoza "Imidlalo" ukudlala kwamanye amamephu.
Bona futhi i- Imithetho esemthethweni yeMahjong uma ufuna ukwazi i- umthethonqubo osemthethweni wamazwe omhlaba jikelele yalo mdlalo othandwayo.
Yini iMahjong? 🀩
UMah Jong ungu-jUmdlalo ongowokudabuka eChina odlalwa ngabadlali abayi-4 futhi ungomunye wemidlalo ejabulisa kakhulu futhi eziswayo namuhla. Kungumdlalo wokubala, ikhono namasu futhi umdlalo wawo ufana kakhulu nalowo we i-domino.
Umdlalo une Izingcezu eziyi-144 futhi lezi zinezinhlamvu nezimpawu ezithile zaseChina, okuvumela ukufezeka kokuhlanganiswa okuningana. Kodwa-ke, kunezinhlobonhlobo zezifunda ezisebenzisa inombolo ehlukile yezingxenye.
Inhloso enkulu yalo mdlalo ukuba owokuqala ukwakha isandla esivumelekile esihlangabezana nezidingo zamaphuzu amancane. Inani lesandla liyahlukahluka futhi lichazwa ubunzima bezinhlanganisela ezenzayo.
Umlando womdlalo we-mahjong uyisihloko esiphikiswa kakhulu phakathi kochwepheshe. Abanye bacabanga ukuthi inakho ngaphezu kweminyaka engama-2500 kanti abanye bathi isukela ngekhulu le-XNUMX noma le-XNUMX. Ngaphambi kwekhulu le-XNUMX, noma kunjalo, awekho amarekhodi omlando.
Ngokwenganekwane yaseChina, isazi sefilosofi esingumShayina Confucius Wayebandakanyeka ekusungulweni komdlalo webhodi. Noma kunjalo, abukho ubufakazi besayensi ngalokhu. Le yinganekwane noma inganekwane ngokuqukethwe okulandelayo:
Owesifazane omuhle owayenesizungu kakhulu wayehlala enkantolo yeNkosi Wu. Ngacishe ngabhoreka ngafa. Ngelinye ilanga waqala ukudweba imidwebo ngoqalo nezinyo lendlovu efana nesimo samatshe e-domino. Eseqedile weza nezincekukazi zakhe waqala wadlala ngazo. UConfucius kuthiwa uwuthuthukisile lo mdlalo ngokuqhubekayo.
Kuhunyushwe kusuka esiShayina kusho ukuthi "Mahjong" kanye nokuthi "undlunkulu oxoxa"futhi, ngokomlando, umdlalo webhodi uthole leli gama ngoba i- UConfucius wayethanda zonke izinhlobo zezinyoni. Ngendlela, izikhulu kuphela ezavunyelwa ukudlala lo mdlalo. Uma abantu abavamile beyidlala, bebephula umthetho.
Izazi-mlando, ngakolunye uhlangothi, zikholelwa ukuthi umdlalo we-mahjong ivela emidlalweni yamakhadi yasendulo yamaShayina eyayibhalwe eChina ngekhulu le-XNUMX nele-XNUMX. Balanda umsuka womdlalo ezindaweni ze IShanghai, i-Anhwei neKiangsu, njengobufakazi bemidlalo enjalo yamakhadi butholakele lapha.
Izingcezu zomdlalo weMahjong 🀄🀩
Isethi ejwayelekile iqukethe Izingcezu eziyi-136 noma eziyi-144. Amasethi e-Mahjong ahlukaniswe ngezigaba ezahlukahlukene:
Faka izingcezu "Umjikelezo"
Faka izingcezu "bamboo".
Faka izingcezu "Umlingisi".
Izingcezu zamaDragons amathathu.
Mahjong umdlalo online
IMahjong isadlalwa njenge- umdlalo webhodi wendabuko. Kodwa-ke, njengoba imidlalo eku-inthanethi yaya ithandwa kakhulu, akuzange kuthathe isikhathi eside ukuthi izinhlobo ezihlukile zeMahjong zivele kwi-Intanethi.
Namuhla, umdlalo webhodi enguqulweni yawo eku-inthanethi ungomunye wemidlalo ethandwa kakhulu futhi, njengomdlalo we-flash, ngokuvamile unikezwa mahhala. Ngakho-ke yena umdlalo we-mahjong iyatholakala njengomdlalo we-inthanethi ezinhlobonhlobo ezahlukahlukene ezinama-motifs ahlukahlukene. Izinhlobo ezidume kakhulu zomdlalo wendabuko namuhla zifaka:
Okumnyama nokumhlophe 2
Isisekelo esiyisisekelo somdlalo ukuthi zonke izingcezu kufanele zisuswe ngababili nganoma yisiphi isikhathi. Ukuphela kokufanele ukwenze chofoza ukumatanisa (ama-motifs afanayo). Kodwa-ke, amatshe angasuswa kuphela uma engamboziwe ngamanye amatshe.
Kufanele uhambe ukhululekile okungenani ohlangothini olulodwa. Ngokuya ngokuthi amatshe atholakala kanjani, impela kungenzeka, awekho amanye amabhangqa avezwayo. Umdlalo usuphelile. Umdlalo ulawulwa nje ngegundane.
Inzuzo ethile yomdlalo weMahjong ukuthi ayikhuthazi nje kuphela ukucabanga okunengqondo, kepha futhi ikhono lokugxila nokukhumbula.
Izinhlobonhlobo ezihlukile zeMahjong
Ngokwamarekhodi, abathengisi baseChina baletha umdlalo emazweni asentshonalanga. Kusungulwe imithetho nezindlela ezahlukahlukene zomdlalo lapha. Umthengisi omkhulu UJP Babock ubefuna ukwenza imithetho ibe lula yingakho ashicilele incwadi "Imithetho yeMah-Jong"Ngenxa yalokho, iMahjong yaduma kakhulu.
Uhlobo lwaseMelika lweMahjong luguqulwe ngokuqhubekayo futhi lwehluka kakhulu kunhlobo yoqobo. Imithetho yesiko elihlukile nayo iguquliwe nakwamanye amazwe afana neJapan noma iGreat Britain. Uhlobo lweHong Kong neCanton lomdlalo ludlalwa kaningi namuhla.
Izinhlobo zeMahjong namuhla🀧
IHong Kong Mhjong noma iCantonese Mahjong 🀄
Indlela esetshenziswa kakhulu yomdlalo yile IHong Kong Mhjong noma iCantonese Mahjong. Ngokusungulwa kwamahholo okugembula aku-inthanethi, iJapan yethule ukugembula emahholo ayo, ivumela abadlali ukuthi xhuma nabanye abavela ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba. Lokhu kwenze umdlalo wathandwa kakhulu, futhi izinhlobo ezintsha zomdlalo odumile zakhishwa futhi.
Kuyathakazelisa ukuthi, inguqulo yokuqala yaseChina yomdlalo ayisadlalwa eChina. Bambalwa kuphela bambalwa abalandeli abathembekile eNtshonalanga.
E-China, kanye naseHong Kong, inguqulo yomdlalo eguquliwe ithandwa kakhulu. Abanye ushintsho lwangemva kuka-1930 lwenze iMahjong yaba umdlalo wokugembula odumile. Ngokungafani neminye imidlalo yenhlanhla, umuntu akakwazi ukuwina umdlalo weMahjong ngoba enenhlanhla.
Umdlalo udinga isu, isivinini kanye nokuhlaziywa kwabanye abadlali ukuze baphumelele. Lokhu kuqinisekisa iMahjong isimo esingcono futhi esinengqondo kakhulu kuneminye imidlalo.
Umehluko neMahjong ukuthi ungadlala wedwa. Kufanele ususe wonke amathayili afanayo ukuze ube yinkosi yeMahjong. Umsebenzi wakho ukuthola nokuqeda izingcezu ezifanayo ukuthola amaphuzu. Qala kusuka ezingqimbeni ezingaphezulu nezingaphandle, bese usebenzela enkabeni. Qala phansi uma kungekho mnyakazo ovumelekile osele!
Imithetho esemthethweni yeMahjong
Ukudlala iMah Jong kahle, udinga ukuqonda nokufaka ngaphakathi imiqondo yayo eyinhloko. Nayi imithetho esemthethweni yeMahjong. Yonke imininingwane equkethwe kule ndatshana ikhishwe emithethweni ye-International Mahjong.
Sithemba ukuthi ungayisebenzisa ngokugcwele. 🙂
Yini oyidingayo ukuqala ukudlala iMahjong?
Amatshe ayi-144 noma ayi-136 eMahjong
UMah Jong, ngumdlalo owakhiwe Izingxenye ze-144. Kuzo zonke kunezinhlamvu nezimpawu zamaShayina eziningi ezivumela ukufezeka kokuhlanganiswa okuhlukahlukene. Izingcezu ezakha umdlalo weMah Jong zimi kanje:
Amathayili ajwayelekile abalwa kusuka ku-1 kuye ku-9, futhi ahlukaniswe ngamasudi amathathu:
Imibuthano noma amabhola
Ekhadini ngalinye kunezine ezifanayo (okungukuthi, sizoba, ngokwesibonelo, amakhadi amane wabathathu babalingiswa). Amathokheni ajwayelekile abizwa nangamanye amagama:
Ukuze chips Uno y Isishiyagalolunye (1 no-9) wesudi ngayinye ibizwa nangokuthi "Ama-terminals".
Ezingxenyeni eziphakathi kwe- Amabili futhi i Eyisishiyagalombili (2-8) wesudi ngayinye yaziwa ngokuthi "Okulula".
Singathola izinhlobo ezimbili zamachips akhethekile:
Izimbali Nezinkathi Zonyaka
La mathayili abizwa ngokuthi akhethekile ngoba athole amaphuzu ahlukile kunalawo ajwayelekile.
Ama-Honours chips ngokuvamile angama-chips abaluleke kakhulu kulo mdlalo, hhayi nje kuphela ukuthi abiza amaphuzu amaningi, kepha kwesinye isikhathi ayaliphindaphinda inani lawo wonke amaphuzu asesandleni.
Amathokheni ezimbali nawasesiteshini kufanele akhonjiswe ngokushesha nje lapho ushiya, futhi asetshenziselwa ukuthola amaphuzu athile kuphela, aphinde athathe elinye ithokheni. Bajwayele ukungawuthinti kakhulu umdlalo uqobo, yingakho babizwa nangokuthi "ama-bonus chips".
Kunemithetho eminingi yeMahjong engacabangi ngamathayela ezimbali nonyaka, ewasusa emdlalweni.
Phakathi kwamathokheni e-honors singahlukanisa izinhlobo ezimbili:
Dragons: obomvu, oluhlaza okotshani nokumhlophe.
Imimoya: kusuka eMpumalanga, eNingizimu, eNtshonalanga naseNyakatho.
Njengamathokheni ajwayelekile, ithokheni ngayinye yokuhlonipha iphindaphindwa amahlandla amane (ngakho-ke kukhona amathokheni ama-4 Womoya Osezansi, ngokwesibonelo).
Ekugcineni, sinezimbali zethayela nezinkathi zonyaka, ezihlanganisa amathayili afinyelela kwayisishiyagalombili:
ezine flores: imvamisa banama-pictograms aluhlaza okwesibhakabhaka noma amnyama, futhi abhalwe ngokubomvu.
ezine izinkathi: Cishe ngaso sonke isikhathi banama-pictograms ngokubomvu, futhi abhalwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka noma omnyama.
Izimbali nezinkathi zihlobene ngqo nemimoya, futhi zisetshenziselwa ukufaka amagoli njengamathokheni ebhonasi maqondana nomoya ngamunye:
La Imbali 1 futhi i isiteshi 1, zihlobene nomoya Este.
UFlor 2 futhi i isiteshi 2, nomoya On.
Lapho sikhuluma ngembali Imbali 3 futhi i isiteshi 3, nomoya Oeste.
La Imbali 4 futhi i isiteshi 4, nomoya North.
Injongo yomdlalo uthole amaphuzu amaningi ngangokunokwenzeka ukuzuzelwa "Ukwenza i-Mahjong".
Ukwenza iMahjong e-RCM udinga ukuthi ube nayo Amaphuzu we-8 okungenani (kungafaki amaphuzu wezimbali / wesizini), ngakho-ke kufanele wazi ukuhamba kahle kakhulu.
Umdlalo ophelele weMahjong uqukethe izandla eziyi-16 noma imidlalo, ihlukaniswe ngamarounds: 4 emahlandla 4 imidlalo ngamunye.
Yize umdlalo ogcwele unezandla noma imidlalo eyi-16, emiqhudelwaneni eminingi udlalwa ngesikhathi. Imvamisa, imidlalo kungaba imizuzu engama-90 noma amahora amabili.
Umjikelezo ngamunye unomoya ohambisanayo, osetshenziselwa ukusungula amaphuzu ekupheleni komdlalo ngamunye, futhi obizwa ngokuthi umoya okhona:
Umjikelezo wokuqala: Umoya waseMpumalanga
Umzuliswano wesibili: Umoya waseningizimu
Umjikelezo wokuqala: Umoya wasentshonalanga
Umjikelezo wokuqala: Umoya waseNyakatho
Imimoya yomjikelezo ngamunye ayithinti umdlalo ngqo, izikolo kuphela. Ekupheleni komzuliswano ngamunye, a ukushintshwa kwezihlalo.
Ukusatshalaliswa kwemimoya kwenziwa kanye kuphela, futhi ngokungahleliwe, ekuqaleni komdlalo.
Umoya ngamunye unikezwa indawo eqondile. IMpumalanga kufanele ibe neNingizimu ngakwesokunene sayo, iNyakatho ngakwesobunxele neNtshonalanga ngaphambili.
Qaphela ukuthi ayivumelani nezimpawu eziyinhloko!
Ngokuya komoya omthintile, umdlali ngamunye kumele ahlale ngokuya ngaleyo ndawo. Ukusatshalaliswa kwemimoya kungenziwa ngezindlela eziningi, kepha okulula kakhulu yilokhu:
Ukuphosa idayisi umdlali ngamunye futhi unikeze izinombolo ngemimoya (1 = East, 2 = South, 3 = West, 4 = North and 5,6 = Roll again).
Ukubeka ucezu olulodwa lomoya ngamunye ubheke phansi, bese umdlali ngamunye ekhetha ucezu.
Ngaphambi komdlalo ngamunye
Udonga luqukethe 18 amabhlogo de Amathokheni amathathu iphakeme, yakha isikwele, futhi kufanele yakhiwe ekuqaleni kwesandla ngasinye emdlalweni.
Umdlali ngamunye kumele enze ingxenye yakhe yodonga ngokuhlanganisa umugqa wamathayili ayi-18 ubude namathayili ama-2 ukuphakama, onke abheke phansi.
Lapho umdlali ngamunye esakhe uhlangothi lwalo lodonga umphumela kufanele ube yisikwele samabhulokhi ayi-18 x amabhulokhi angu-18.
Ngaphambi kokusabalalisa amathokheni, kubalulekile ukubona ukuthi yiluphi uhlangothi lodonga esizoqala ukusabalalisa.
Ukuze wenze lokhu, umdlali Este izokwethula amadayisi amabili, ezokhombisa uhlangothi lodonga lapho ukusatshalaliswa kwamaships kuzoqala khona.
Ukwazi ingxenye yodonga lapho ukusatshalaliswa kuqala khona, kubalwa kusuka eMpumalanga futhi kulandelwe ngokulandelana komdlalo (ngokuphikisana newashi). Ngakho-ke, uzoqala odongeni olusempumalanga uma ugoqa u-5 noma u-9 ngamadayisi, ohlangothini oluseningizimu uma ugoqa u-2, 6 noma u-10, njalonjalo.
Esibonelweni sethu, umdlali waseMpumalanga ugoqe u-6 no-5, okukhombisa ukuthi udonga luzovuleka ngasohlangothini lomdlali waseNtshonalanga (6 + 5 = 11).
Umdlali otholakala ngaphambi kwesiqeshana sodonga okuzokwenziwa ngalo ikhefu uphethe ukudubula abanye 2 amadayisi ezokhombisa ibhulokhi lamathayili lapho udonga luzovuleka khona (okungukuthi, ibhulokhi okuzothathwa kulo amathayili). Esibonelweni sethu ngumdlali waseNtshonalanga.
Ukusatshalaliswa kwama-chips kwenziwa ngumdlali ngamunye othatha ibhlokhi lakhe lamachips.
Ibhulokhi yokuqala izoba eseduze kwenani eliphelele lamadayisi amane aqoqiwe (amadayisi ama-2 ukwazi uhlangothi lodonga lapho kuqala ukusatshalaliswa khona namanye amadayisi ama-2 ukwazi ibhulokhi).
Kuyaqala bala kusukela kwesokudla kuye kwesobunxele ohlangothini lodonga olukhonjiswe ngamadayisi amabili okuqala (ngokubuka komdlali osengxenyeni yodonga oluvuleka ngalo. Esimweni sethu, umdlali waseNtshonalanga). Uthatha ifayela le- ibhulokhi elilandelayo Faka amadayisi ama-4 kubhlokhi.
Nota: Qaphela ukuthi kungenzeka ukuthi inani lamadayisi ama-4 likhulu kune-18 (okungububanzi bohlangothi olulodwa lodonga). Uma kunjalo, ibhlokhi lokuqala ohlangothini olulandelayo lodonga liyaqhubeka ukubalwa kuze kufinyelelwe esilinganisweni sedayisi.
Esibonelweni sethu, iNtshonalanga isiphonse amanye amadayisi ama-2 kwabe sekugoqiwe ama-4 no-5. Ngakho-ke, ukusatshalaliswa kwama-chips kuzokwenziwa kusuka endaweni elandelayo engu-20 (6 + 5 + 4 + 5 = 20). Okusho ukuthi, uzoqala ukuthatha amathayili odongeni ukusuka kubhulokhi eliseduze nenombolo 20, ubala ukusuka kwesokudla kuye kwesobunxele (ngokombono womdlali waseNtshonalanga) kusuka kwibhulokhi yokuqala ohlangothini lomdlali waseNtshonalanga.
Ithayela ngaphambi kokuqala kwethayela lokusabalalisa lizoba yi-tile yokugcina odongeni.
Esibonelweni sethu, ithayela lokugcina odongeni yi-tile ephezulu yebhulokhi engu-20 (ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka), futhi ibhulokhi lapho ithayili lithathwa khona yilona elibomvu.
Ku-RCM ayikho udonga olufile.
Isidlali saseMpumalanga besizothatha amabhlogo amabili okuqala amathokheni (esewonke amathokheni ama-4).
Ibhlokhi enethokheni lokugcina imvamisa izungeziswa (kepha ayidingeki) ukukhombisa ngokusobala ukuthi lolo hlangothi lodonga ukuphela. Leli bhulokhi lingaphendulwa yinoma yimuphi umdlali (imvamisa umdlali ophambi kwaleli bhulokhi noma umdlali waseMpumalanga uqobo).
Ngemuva kwalokho umdlali waseNingizimu uzothatha amabhulokhi amabili alandelayo.
Ngemuva kwalokho umdlali waseNtshonalanga wayezothatha amabili alandelayo.
Ngemuva kwalokho umdlali waseNyakatho amabhulokhi amabili alandelayo.
Kamuva, umdlali waseMpumalanga uzonikezwa amanye amabhulokhi amabili.
Futhi njalo kuze kube yilapho umdlali ngamunye ethatha amabhlogo akhe amathathu amathayela ama-4 (okungukuthi, ngaleso sikhathi umdlali ngamunye kufanele abe namathayili ayi-12 esewonke).
Ekugcineni, umdlali waseMpumalanga uzothatha amathayili ama-2 (amathayili aphezulu emabhuloki amakwe ngombala obomvu).
Bese kuthi abadlali baseNingizimu, eNtshonalanga naseNyakatho bathathe ithokheni eli-1 ngamunye.
Ekupheleni kwesivumelwano, umdlali ngamunye uzoba namachips ayi-13, ngaphandle kwaseMpumalanga, okuzoba no-14. Umdlali onguMpumalanga uzobeka idayisi ngakwesokunene sakhe ukukhombisa ukuthi ungowaseMpumalanga.
Imithetho YaseChina YaseClassic Deal Token
El vimba lapho uqala khona ukuthatha ama-chip ibhulokhi etholakala endaweni ekhombisa isamba se- amadayisi amathathu asongwe ngaphambili.
Se bala kusukela kwesokudla kuye kwesobunxele kusukela ekubukeni komuntu kulelo hlangothi lodonga.
Esibonelweni sethu, ibhulokhi yokuqala ibhlokhi 12 ohlangothini olusenyakatho lodonga lomdlali. Ngamanye amagama, ungaqala ukuthatha amathayili odongeni kusuka kubhlokhi 12, okuyibhlokhi ebomvu kulo mfanekiso.
Lapho usazi ukuthi uzoqala kuphi ukuthatha amathayili, kuneqembu lamathayili elingenakusetshenziswa ukweba amathayili ajwayelekile kuwo wonke umdlalo. Lawa mathokheni abizwa udonga olufile, futhi kunjalo Amathokheni amathathu (okungukuthi, amabhlogo ayi-7) asebenzela ukuqoqa ama-chips angeziwe kuphela.
Njalo kumele uhlale Amathokheni odonga afile ayi-14. Ngakho-ke, udonga olufile luzohamba njengoba kukhishwa amanye amathayili wokufaka esikhundleni. Uma udonga olufile lufinyelelwa ungawuqedanga umdlalo, umdlalo uzobhekwa njengophelile kungekho noyedwa owinile (lesi simo sibizwa kanjalo isandla esingenalutho).
Esibonelweni sethu, ngamathayili ayi-14 (amabhlogo ayi-7) kwesokudla kusuka kuthayela lasekhaya. Amabhulokhi aluhlaza okwesibhakabhaka.
Lapho ibhulokhi yokuqala isunguliwe, idili ye-chip iyaqala. Umdlali ngamunye uthatha amabhlogo akhe amathokheni njengoba kuchaziwe ngenhla *.
Ngaphambi kokuqala, kufanele sikhumbule ukuthi kunezinhlanganisela noma izisekelo ezi-3 eziyisisekelo eMahjong, kepha ukuze sikwazi ukuzenza, eminye imithetho kufanele ilandelwe:
Kuyinto a I-3-tile iqonde kulandelana kwe- isudi efanayo (Ojo, Ama-chips ama-3 ncamashi, azikho izitebhisi zama-chips ama-2 noma ama-4).
ngokulahla kwesidlali ngakwesobunxele
noma ngamathokheni athathwe odongeni.
Ngaphandle: Uma udinga kuphela ukwenza i-Chi ukuthola iMahjong, ungayenza ngesiqeshana esilahlwe yinoma yimuphi umdlali (akudingeki ukuthi ube kwesobunxele).
I-Pung / Pung / iPung
Kuyinhlanganisela ye- 3 tile ezifanayo.
Ingakhiwa ngokulahla noma yimuphi umdlali.
I-Kong / Kang
Kuyinhlanganisela ye- 4 tile ezifanayo.
Uma uveze i- UPung futhi udweba odongeni ithokheni elingana nalezo zePung, unganweba iPung bese wakhe iKong. (Ojo, awukwazi ukwakha iKong ngale ndlela ngokulahla komunye umdlali. Lapho nje iPung iveziwe, inganwetshwa kuphela iye kuKong ngophawu olutholayo)
Uma unamathayili angu-4 afanayo esandleni sakho, ukuze akwazi ukubala njenge-Kong kufanele uwakhombise. Kufanele ubeke izingcezu ezi-4 zibheke phansi (zifihliwe, ngaphandle kokwazi ukuthi ziyini) futhi uzimemezele njengeKong. Le Kong, lapho amathokheni ama-4 ayephethwe ngesandla futhi amathokheni ahlatshelelwa kepha engakhonjiswa, ibizwa I-Kong efihliwe.
Umdlalo wenzeka ngokushintshana, futhi uhlala wenzeka ohlangothini olufanayo: ngokuphikisana newashi. Landela ukulandelana: East-South-West-North-East -..., njalonjalo.
Lo mqondo womdlalo ulandelwa njalo, ngaphandle kwalapho umdlali ongeke abe nethuba efuna ithayili elilahlwe ngomunye umdlali ukwenza iPung, Kong noma iMahjong.
Uma kunjalo, i-oda liphuliwe futhi umdlalo uzoqhubeka kulowo mdlali, kodwa-ke ubuzoqhubeka futhi ngomqondo esiwukhombisile kulowo mdlali.
Isibonelo, umdlali waseMpumalanga uphonsa ithokheni efunwa ngumdlali waseNtshonalanga. Uma kunjalo-ke, umqondo uphukile (ngoba kufanele kube yithuba lomdlali waseNingizimu), futhi umdlalo uzolandelwa umdlali waseNtshonalanga, okuthi ngemuva kokuthatha ithayela elilahliwe, aphonse enye yethayela lakhe, umdlalo uqhubeke nomdlali waseNyakatho. .
Ngemuva kokusatshalaliswa kwama-chips
Lapho amathokheni esesatshalalisiwe, kufanele kukhonjiswe amathokheni ezimbali nawasesiteshini umdlali ngamunye, kanye neKong engenzeka (ngokulandela i-oda).
Izimbali nezinkathi zonyaka ziboniswa kuqala, bese kuba yiKong.
Ukuqala ngesidlali saseMpumalanga futhi siqonde ohlangothini lokudlala (eMpumalanga-Ningizimu-Ntshonalanga-Nyakatho), abadlali bamemezela ama-Flower ne-Season Tokens abanawo, bababeka babheke phezulu phambi kwabo nangakwesokudla.
Ngokhombisi ngamunye we-Flower and Seasons Token okhonjisiwe, umdlali ngamunye uthatha ithokheni entsha odongeni.
Amathokheni angeziwe athathwe odongeni ngezimbali / izinkathi noma i-Kong abizwa ama-chip wokufaka noma wokungezelela. Amathokheni wokushintshwa athathwa ohlangothini ukuphela kodonga. Esibonelweni sethu, ngenxa yebhulokhi lemibala eluhlaza okwesibhakabhaka.
Uma ngabe kukhona amanye amathayili amasha ebengolunye uthayela we-Flowers and Seasons, kuzokhonjiswa enye ithayili bese ithathwa kusukela ekugcineni kodonga futhi, njalonjalo.
Asikho isibopho ukukhombisa ngokushesha amathayili wezimbali / wesizini noma i-Kong. Zingakhonjiswa nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi somdlalo inqobo nje uma umdlalo ungakapheli.
Umdlalo uqala ngokulahla ithayili ngumdlali waseMpumalanga (khumbula ukuthi iMpumalanga iqala ngamathayela ayi-14, kanti abanye abadlali baqala ngabangu-13).
Umdlalo uthuthukiswa njalo ulandela umqondo ochaziwe, futhi uphuke kuphela lapho umdlali ongenalo ithuba efuna ithayili elilahliwe lokwenza iPung, Kong noma iMahjong. Ngemuva kwalokho bekuzoqhubeka futhi kulowo mdlali, kulandela umqondo ofanayo womdlalo.
Umdlalo uphela lapho umdlali enza iMahjong noma amathayili odonga aphele.
Ngaso sonke isikhathi lapho umdlali elahla ithayili, kufanele alibeke abheke phezulu ngaphambi kwesikhundla sabo (futhi yileyo ndlela ezosala ngayo kulo lonke umdlalo), kulayini o-odiwe wamathayili ayi-6 (umugqa wokuqala engxenyeni emaphakathi yetafula nokulandelayo okuqhubekayo nokuningi eduze).
Alukho uphawu olubizwayo. Inhlanganisela kuphela eyakhiwa ngezicucu ezilahlwe abanye abadlali, izimbali / iziteshi noma i-Making Mahjong (ekhombisa ngokusobala iChi, iPung, iKong, i-Flower noma iMahjong / Hu) okushiwo ngokuzwakalayo.
Uma umdlali efisa ukuthatha ithokheni (futhi angayithatha) kufanele asho njalo ngokushesha lapho ilahlwa, noma kungesiyo ithuba lakhe.
Ithayili elilahliwe lingathathwa ukwakha inhlanganisela nje, okumele futhi ikhonjiswe babhekane ngqo nabanye abadlali.
Qaphela! Awukwazi ukuthatha ithayili elilahliwe ukumane unqwabelene, ngaphandle kokwenza umdlalo.
Lapho ithayela elilahliwe lingathathwanga yinoma ngubani, alinakusetshenziswa kulo lonke umdlalo (okungukuthi, uma kamuva sinentshisekelo ezandleni zethayela ezilahliwe ngaphambili, ngeke sikwazi ukuwuthatha).
Ngemuva kokulahla ngakunye
Ngemuva kokulahla ithokheni, izinto ezi-3 zingenzeka:
Umdlali ufuna ukuthi ithayili elilahliwe ligcwalise iPung noma iKong noma lenze iMahjong.
Kufanele ukusho ngokushesha lapho usulahliwe, noma ngabe akusilo ithuba lakho.
Kufanele uveze umdlalo ngendlela ezobonakala kubo bonke abanye abadlali ngesikhathi sokuphela komdlalo.
Manje ukuhleleka kokudlala kuzoqhubeka kulo mdlali, okufanele aphonse ithokheni.
¡Ojo, umdlali odonsa ithayela elahliwe akakwazi ukuthatha uthayela odongeni! (Ngaphandle kokwenza kukaKong)
Uma enza iMahjong, uzoshiya ithayela eyebiwe avala ngalo elele phansi, enze inhlanganisela anqoba ngayo:
Umdlali ongakwesokudla kwelahli ufuna ukuthi ithokheni yakhe i-Chi.
Kufanele isho njalo ngokushesha lapho isilahliwe.
Ekugcineni, umdlali kufanele aphonse ithayela (Khumbula, umdlali odweba ithayela elilahliwe akathathi odongeni, ngaphandle kwalapho kwakhiwa iKong).
Akekho umdlali ofuna ithokheni.
Ithayela elilahliwe alinakusetshenziswa kulo lonke umdlalo.
Umdlali olandelayo ngokulandelana kokudlala ubengathatha ithayela odongeni futhi kufanele alahle enye ithayela.
Lwela ithayili elilahliwe
Uma abadlali abangaphezu koyedwa bethi ithokheni efanayo, ukuhleleka kokukhetha ukuthatha ithokheni kuzoba ngokulandelayo:
Umdlali ofuna ithokheni yokwenza Mahjong (o Hu).
Okomdlali odinga ithokheni ye UPung noma a Kong.
Okomdlali ofuna ithokheni enze ifayili le- Chi.
Nota: Uma abadlali ababili noma ngaphezulu befuna ithayela elifanayo ukwenza iMahjong, umdlali okungukuqala kwakhe ukuwina ngomqondo ojwayelekile womdlalo. Munye kuphela umdlali onganqoba.
Ukwebiwa kwethayela elilahliwe
Lapho umdlali edonsa ithokheni elahliwe ngomunye, kufanele adilize phansi ithokheni eyebiwe, ayibeke ngendlela ezokhombisa ukuthi ngubani omnike yena.
Isibonelo, uma umdlali edonsa ithokheni elahliwe yi- umdlali ngakwesobunxele sakhe (a 3 of Bamboo or a 9 of Discs), kufanele ushiye inhlanganisela ngokubuka ithokheni edwetshiwe iphenduliwe yabekwa ngakwesobunxele:
Uma umdlali edonsa ithokheni elahliwe yi- umdlali ngaphambili (a 9 Discs), kufanele ushiye inhlanganisela ngokubuka lapho kuphendulwa khona ikhawunta ebiwe futhi yafakwa maphakathi.
Uma umdlali edonsa ithokheni elahliwe yi- isidlali ngakwesokudla (a 9 of Discs), kufanele ushiye inhlanganisela ngokubuka lapho kuphendulwa khona ikhawunta ebiwe yabekwa kwesokudla.
Ngemuva kokwenza inhlanganisela edwetshiwe nethokheni elahliwe ngomunye umdlali, leyo nhlanganisela kufanele ishiywe ekubonisweni komdlalo wonke emdlalweni. ingxenye kwesokudla lomdlali olibumbile.
Lokho wukuthi, zombili izimbali / iziteshi kanye neKong, kanye nenhlanganisela enamathayili alahliwe, asele kwesokudla somdlali ngamunye.
Uma amathayili odongeni ephela futhi kungekho muntu onqobayo umdlalo usuphelile. Lezi zinhlobo zemidlalo zibizwa isandla esingenalutho.
Ngakolunye uhlangothi, uma umdlali enza iMahjong, kufanele abale wonke amaphuzu akhe ngokuzwakalayo (ngisho namaphuzu wezimbali), ethatha amathayili akhe alahliwe enhlanganisweni ngayinye noma ithayela elithola (ngephuzu ngalinye ithayili elilahliwe noma wonke amaphuzu ayi-10 ithayela ubuso obulahliwe phansi).
Okokuqala, amaphuzu ngokudlala ngakunye afakiwe, ukwenza kucace ukuthi amaphuzu ayisishiyagalombili afinyelelwe. Ngemuva kwalokho amaphuzu wezimbali ayengezwa.
Lokhu kwenzelwa ukucacisa izibalo ezisetafuleni ngaphandle kokusebenzisa ipensela nephepha kuma-akhawunti.
Isibonelo, uma umdlali ezuze amaphuzu ayi-12 (ebala amaphuzu ezimbali), kufanele athathe amathokheni ayi-12 kokulahliwe:
Kungenzeka futhi ukuthi uthathe amathayili ama-3 (1 ubuso phansi = amaphuzu ayi-10, 2 ubuso obheke phezulu = 1 iphuzu lilinye)
Nota: Uma umdlali esho iMahjong, bonke abanye abadlali akumele bakhombise amathayili abo noma bamoshe amathayela alahliwe kuze kube yilapho wonke amaphuzu ebaliwe.
Uma umdlalo ngamunye usuqediwe (noma ngabe othile uyaphumelela noma uma kukhona isandla esingenalutho), imimoya ehlotshaniswa nomdlali ngamunye iyajikeleziswa (imimoya, hhayi abadlali, ngaphandle kokuthi umjikelezo uphela).
Umdlali obeseMpumalanga uba yiNyakatho, umdlali obenguNingizimu uba yiMpumalanga, iNtshonalanga iba eNingizimu neNyakatho iye eNtshonalanga.
Ekupheleni komjikelezo ngamunye
Ekupheleni komzuliswano ngamunye, ngaphezu kokujikeleza imimoya, kukhona ukushintshana ezikhundleni zabadlali. Inhloso yalezi zinguquko zezihlalo ukuqinisekisa ukuthi umdlali ngamunye ushiyile futhi ulungile ngamunye wabadlali kulo lonke umdlalo.
Ekupheleni komjikelezo womoya waseMpumalanga futhi ngaphambi kokuqala ukuzungeza komoya waseningizimu, izihlalo zabo ziyashintshana phakathi kwalo mdlali manje osezoba seMpumalanga nalowo obezoba seNingizimu. Abadlali baseNtshonalanga naseNyakatho nabo bashintshana ngezihlalo zabo.
Ekupheleni komjikelezo womoya waseNingizimu futhi ngaphambi kokuqala ukuzungeza komoya wasentshonalanga, umdlali manje osezoba seMpumalanga uzoya esihlalweni somdlali waseNtshonalanga, umdlali waseNingizimu aye eNyakatho, umdlali waseNtshonalanga aye eNingizimu naseNyakatho aye eMpumalanga.
Ekupheleni komjikelezo womoya wasentshonalanga futhi ngaphambi kokuqala ukuzungeza komoya wasenyakatho, umdlali osezoba seMpumalanga nalowo obezoba seNingizimu bashintshaniswe ngezihlalo zabo. Ngokunjalo nabadlali baseNtshonalanga naseNyakatho babezoshintshana ngezihlalo zabo.
Kungabonakala kudideka (futhi kunjalo), kodwa ngale ndlela bonke abadlali bashintsha abaphikisana nabo kusuka kwesobunxele nangakwesokudla, ngaleyo ndlela bavimbele ukudonsa kwemimoya ekuqaleni komdlalo ekumakeni omakhelwane bethu kuwo wonke umdlalo.
Nota: Enye indlela yokwazi ukuthi ushintsho lwezihlalo lwenziwe kahle yini ukuthi umdlali othole iNingizimu ngenkathi evimba imimoya kufanele abe ngumdlali waseMpumalanga ekuqaleni komjikelezo waseNingizimu. Lowo othole iNtshonalanga kufanele abe seMpumalanga lapho eqala umjikelezo waseNtshonalanga, futhi noma ngubani othola iNyakatho uzoba lapho eqala umjikelezo waseNyakatho.
Khombisa izimbali zokuqala
Umdlali ngamunye, naye kumele akhombise ukuthi unazo yini izimbali (ngokubiza "Imbali" noma "Imbali") noma angabi nazimbali ("Anginazo", "Anginazo izimbali" noma "Azikho izimbali"). Ngemuva kokuthatha amathokheni ezimbali ekugcineni kodonga, umdlali ngamunye kufanele amemeze ukuthi azisekho izimbali ("Azisekho izimbali" noma "Azisekho izimbali").
Umdlali Este Unophawu lwe-Flowers and Seasons, ngakho-ke wayezolukhombisa ngokulishiya ngakwesokunene athathe enye ithokheni kusukela ekugcineni kodonga (uthola ama-Discs ama-5). Lapho ithokheni eyengeziwe isithathiwe, umdlali waseMpumalanga kufanele asho ngokuzwakalayo ukuthi akasenazo izimbali.
Lapho kwakuyithuba lomdlali On kufanele isho ngokuzwakalayo ukuthi ayinazimbali.
NjengaseMpumalanga, umdlali Oeste, inezimpawu zezimbali nezonyaka (inamathokheni ama-2 ezimbali), futhi lapho ithatha amathayili athe xaxa odongeni, kuzophuma amathayili amabili afanayo we-2 of Characters. Ngemuva kokudweba amathayili afakwe esikhundleni, iNtshonalanga izothi ayinazo izimbali.
Lapho-ke bekungaba ithuba lomdlali North. Futhi ayinazimbali, ngakho-ke ngingasho ngokuzwakalayo ukuthi ayinazimbali.
Umdlali waseMpumalanga ungowokuqala ukulahla ithayili. Umdlali waseMpumalanga ugoqa ithokheni 3 yoqalo, ayibeke phambi kwakhe:
Njengoba ithokheni engu-3 bamboo ifunwa ngumdlali waseNingizimu futhi akekho noyedwa oyifunayo, uyayithatha bese akha i-Chi (2-3-4 ye-Bamboo), ayishiye ngakwesokunene sakhe ayibone futhi i-3 ye-Bamboo ijikile (ishiya uphawu olungakwesobunxele olukhombisa ukuthi ngumdlali kwesobunxele sakhe, eMpumalanga, osiphosile).
Njengoba iNingizimu ithathe ukulahla, ayikwazi ukweba odongeni. Manje kufanele alahle ithokheni, bese egingqa ama-9 weMibuthano.
Kodwa-ke, ithokheni engu-9 yemijikelezo inentshisekelo kumdlali waseNyakatho ukwakha iKong. Ngakho-ke, ithuba lomdlali waseNtshonalanga belizokweqiwa, bese umdlali waseNyakatho akhombise ukunyakaza kwakhe (kufanele akhombise le Kong, ngoba ayifihliwe), ephendula enye ye-Bamboo 9 enkabeni yenhlanganisela (njengoba eyiphonsile umdlali ophambi kwakhe, iNingizimu) futhi wayezothatha ithokheni eyengeziwe ukusuka ekugcineni kodonga (ngoba ngemuva kokwenza iKong kumele kukhishwe ithokheni eyengeziwe kusuka ekugcineni kodonga). Uthola abalingiswa abayi-7.
Yize manje sekuzoba kumdlali waseNyakatho ukuphonsa ithokheni, unquma ukudalula iKong efihliwe (ngakho-ke uphendulela amathokheni ama-4 abheke phansi) bese ethatha enye ithokheni eyengeziwe.
Ngemuva kokukhipha ithokheni yakhe odongeni (uthola o-1 weSiyingi), umdlali waseNyakatho kufanele alahle ithokheni, ngemuva kwalokho, uma bekungeyona intshisekelo kunoma ngubani, umdlali wase-East ubedlala, ngubani ozothatha ithokheni odongeni, njalo njalo. Umdlalo uphelile lapho umdlali enza iMahjong noma wonke amathayili asetshenzisiwe (asikho isandla).
Ukudlala kanye nezikolo zabo
Ku-RCM kunemidlalo engama-81, ebiza ukusuka endaweni eyodwa kuya kumaphoyinti angama-1. Ziyadingeka Amaphuzu we-8 ukwazi ukwenza iMahjong.
Uma umdlali evala nge-chip elahlwe ngomunye, uthola kulowo mdlali amaphuzu esandla sakhe, ngaphezu kwamaphoyinti angama-8 angeziwe avela kubo bonke abadlali (kufaka phakathi nalowo ophonsa i-chip evunyelwe ukuvala).
Uma evala ngothayela odonswe odongeni, ungeza amaphuzu ayi-8 esilinganisweni sakhe bese ethola lelo nani komunye nomunye wabaphikisi abathathu.
lahla Kusuka odongeni
Lahla Amaphuzu Wokunqoba + 8 -
Phumula 8 -
bonke - Amaphuzu Wokunqoba + 8
Izimiso ezijwayelekile ekuhlanganisweni kwemidlalo
Ukushaya amaphuzu kwemidlalo efaka neminye
Lapho ukuhambisa kungenziwa ngaphandle kokufaka okunye, ukuhambisa okuvele kufakiwe ngeke kuzuze.
Umgomo wokukhishwa noma ukuvimbela ukusetshenziswa okuphindaphindwayo komdlalo
Uma kusetshenziswa izinhlanganisela ezimbili noma ezintathu ukwenza ukuhambisa, ubuningi balezi zinhlanganisela zingasetshenziselwa ukusetshenziswa nezinye izinhlanganisela bese kwakhiwa isinyathelo esisha.
Bangangezwa: 1 iphuzu le-Two Pure Bamboo End Chis, iphuzu eli-1 le-Two Pure Character End Chis kanye nephuzu elilodwa kuphela le-Mixed Double Chow (1-1-2 ye-Bamboo ne-3-1-2 yezinhlamvu). Bekungeke kwenzeke ukuthi kusetshenziswe kabusha u-3-7-8 we-Bamboo no-9-7-8 wezinhlamvu ukuthola elinye iphuzu yi-Mixed Double Chow, ngoba sesivele sisebenzise enye yenhlanganisela yemidlalo ye-Two Chis Terminals Pure (the 9-1 -2, Kokubili kwe-Bamboos ne-Characters)
Imidlalo edlala isandla esifihliwe
Emidlalweni efihliwe ngokwemvelo, amaphuzu awangezelwa iSandla Esifihliwe, yize engahlanganiswa neSandla esifihlwe ngokuphelele.
Le midlalo yilawa: Amathayili Athungiwe Ane-Honours Ephansi, Amathayili Athungiwe Ane-Honours Enkulu, Amabili Amabili, ama-Pung 7 Afihliwe, Amasango Ayisishiyagalolunye, Amabhangqa Amabili Ahlanzekile Alandelanayo nezintandane eziyi-4.
I-Two Exposed Kong ibiza amaphuzu amane.
I-Kong eveziwe ihlangene ne-Hidden Kong ibiza amaphuzu ayi-6.
I-Hidden Kong emibili ibiza amaphuzu ayi-8.
1 Amaphuzu Ukudlala
1. I-Double Chi efanayo
Izitebhisi ezimbili zesudi efanayo nokulandelana kwenombolo efanayo.
2. I-Double Mixed Chi
Izitebhisi ezimbili zamasudi amabili ahlukene, kepha ukulandelana kwenombolo efanayo.
3. Isitebhisi esifushane
Ama-Chis amabili e-suit efanayo, ngokulandelana kwenombolo okulandelanayo.
4. Ama-Terminal amabili e-Pure Pure
Izitebhisi zika-1-2-3 no-7-8-9 wesudi efanayo.
5. IPung yamaTheminali noma iMimoya
Isandla esiqukethe i-Pung of Terminals (izibali 1 no-9) noma ama-Winds, ngaphandle kwe-Own Wind noma i-Dominant Wind (the Wind of the round).
6. Kong eveziwe
I-Kong itholwe kuthayela elilahliwe noma ekungezeni ithayela ku-Pung esivele ibonisiwe. Qaphela: Ukulahla akukwazi ukudonswa ukunweba iPung eveziwe.
7. Umndeni Ongekho
Isandla lapho kungekho khona ama-chips wohlobo olulodwa kwezingu-1 zamasudi. Okusho ukuthi, isandla esinamasudi ama-3 kuphela. Iyakwazi ukuthwala amaHonours.
8. Ayikho i-Honours
Isandla esenziwe ngamathokheni amasudi kuphela, angenawo amathokheni we-Honours. Lokho wukuthi, ayikho iMimoya noma amaDragons.
9. Edge Linda
Ilinde u-3 noma u-7 ukwakha i-Chi eno-1-2 noma u-8-9. Lesi sandla asisebenzi uma sihlanganiswa nanoma yiluphi olunye uhlobo lwe-Wait (ngokwesibonelo, ukulinda ukuvalwa ngama-chips ayi-7-7-8-9 kuthathwa njengokuhlanganiswa kwe-Edge Wait ne-Simple Wait, njengoba kungathathwa ngokuthi i-7 izokwakha u-7-8- 9 noma i-pair 7-7).
Qaphela: Amaphoyinti okubamba anikezwa kuphela uma kudingeka ithokheni eyodwa.
Isibonelo, ulinde ukuvala nge-Bamboo 7 kuphela ene:
10. Kuvaliwe Ukulinda
Vala ngokulinda okuvaliwe (isibonelo, ukuba no-2-4 nokulinda okungu-3). Lesi sandla asivumelekile uma sihlanganiswa nanoma yiluphi olunye uhlobo lwe-Wait (ngokwesibonelo, ukulinda ukuvalwa ngamachips angu-2-2-2-4 kuthathwa njengokuhlanganiswa kwe-Closed Wait and Simple Wait, ngoba basebenza bobabili u-3 no a) Kodwa-ke, ukuhlanganisa i-Waits on (ngokwesibonelo, u-4-6-7-7-8 futhi ukulinda u-9 kuthathwa njengokuhlanganiswa kwe-Edge Wait ne-Closed Wait, kepha kuphela ithokheni eli-8 elisebenza ukuvala).
Isibonelo, uma kungavalwa kuphela ngemijikelezo emi-5 nge:
11. Ukulinda okulula
Vala ngekhadi elenza laba ababili. Lokhu kudlala akuvumelekile uma kuhlanganiswa nanoma yiluphi olunye uhlobo lwe-Wait (ngokwesibonelo, ukulinda ukuvalwa ngamachips angama-2-2-2-4 kuthathwa njengokuhlanganiswa kwe-Closed Wait ne-Simple Wait, ngoba basebenza bobabili u-3 no a 4). Futhi akwamukelekile uma izinketho ezimbili kulindeleke ukuthi zivalwe nababili (isibonelo, 6-7-8-9 futhi balindele u-6 noma u-9).
12. Vala Udonga
Vala ngethokheni ebanjwe odongeni.
13. Izimbali Nezinkathi Zezikhathi Zonyaka
Imbali ngayinye ilingana nephuzu elilodwa. Babalwa ekugcineni kwesamba sawo wonke amaphuzu. Azisebenzisi amaphuzu amancane wamaphoyinti ayi-1. Zingaboniswa noma kunini lapho ufuna khona. Zishiywa ohlangothini lwesokunene (njengazo zonke ezinye izinyathelo kanye namathayili aveziwe) futhi kuthathwa ithayili elisha kusukela ekugcineni kodonga. Uma umdlali evala ngethokheni entsha, kungezwa iphuzu lokuvala udonga.
Imidlalo yamaphoyinti ama-2
14. IPung of Dragons
UPung (noma uKong) waseDragons. Kungafihlwa noma kuvezwe obala.
15. I-Pung Wind Wind
I-Pung (noma i-Kong) yomoya omkhulu, ohambelana nomoya womjikelezo. Kungafihlwa noma kuboniswe.
16. Own Wind Pung
I-Pung (noma i-Kong) yomoya uqobo Ungafihlwa noma ukhonjiswe.
17. Isandla Esifihliwe
Yenza yonke inhlanganisela ifihlwe futhi ivaleke ngethayela elilahliwe.
18. Zonke Chi
Isandla esakhiwe kuphela uChis futhi asinama-Honours.
Imidlalo yamaphoyinti ama-4
19. Ithebhu Elibanjiwe
Sebenzisa amathayili ama-4 wethayela elinikeziwe, ngaphandle kokulimemezela njengeKong (okungukuthi, ulisebenzise ukwenza okunye ukuhamba). I-Kong efihliwe noma eveziwe ayibalwa njenge-Hoard Token.
20. I-Double Pung exubile
Isandla siqukethe ama-Pung amabili noma i-Kong yenombolo efanayo (kodwa amasudi ahlukile ngokusobala).
21. IPungge emibili efihliwe
Isandla siqukethe ama-Pungs amabili angazange avezwe (okungukuthi, awakhiwe ngamathayili alahliwe). I-Kong efihliwe ayifanele iPung efihliwe.
22. IHong Kong efihliwe
Isandla esakhiwa ngamathayili angu-4 afanayo, okungekho kulahla, futhi okumenyezelwe njengeKong. Wonke amathayela abhekiswe phansi.
23. Konke Kulula
Isandla ngaphandle kwamathokheni weTheminali noma amathokheni we-Honor. Wonke amachips asesandleni alula (chips 2-8).
24. Isandla Esivuselelwe Samatheminali namaHonours (Konke kunamaHonours kanye / noma amaTheminali)
Isandla esifaka okungenani i-Terminal tile eyodwa noma i-Honor eyodwa ekuhlanganisweni ngakunye, kufaka phakathi okubili.
Imidlalo yamaphoyinti ama-6
25. Isandla Esifihlwe Ngokuphelele
Isandla sigcwaliswe ngawo wonke amathayili adonswe oDongeni, kufaka phakathi la maphela.
26. Kuvezwe amaKong Kong amabili
Isandla siqukethe ama-Kong amabili abonisiwe.
27. Ithebhu Yokugcina
Vala ngethayela elilahliwe elingelokugcina lolo hlobo kwesokunxele (ngokwesibonelo, uma sebevele benalo
ilahliwe noma isetshenziswe abanye abadlali ekuhlanganisweni okuveziwe (amathayili amathathu we-Bamboo 4, avale ngethayela lokugcina le-Bamboo 4). Ayikwazi ukuhlanganiswa ne-Kong Robo.
28. Yonke iPung
Isandla esakhiwe ngu-4 Pung (noma uKong) nalaba ababili.
29.Isandla seSemipura (Isandla Esihlanzekile Nezihlonipho)
Isandla esiqukethe amachips kusuka kusudi eyodwa kwezintathu kuphela, ngokuhlanganiswa nama-Honours chips.
30. Amahlaya Amathathu Ahlanganisiwe
Isandla esiqukethe ama-Chis amathathu amasudi amathathu, futhi ama-chips awo okuqala asesikhaleni esikhuphukayo sesinyathelo esisodwa.
Imidlalo yamaphoyinti ama-8
31. Yonke Imindeni Nokuhlonishwa
Isandla esenziwe yinhlanganisela lapho kuvela khona amathokheni ezinhlobo ezi-5 asemdlalweni. Amasudi amathathu: Abalingiswa, ama-Disks, ama-Bamboos, kanye ne-Winds ne-Dragons.
32. Isandla Esiveziwe
Isandla lapho inhlanganisela ngayinye isiqediwe khona nama-chips alahlwe abanye abadlali, kufaka phakathi laba bobabili. Ingahlanganiswa namaphuzu wokulinda.
33. AmaDragoni amabili
Isandla siqukethe ama-Pung amabili (noma i-Kong) ama-Dragons.
34. I-Kong Efihliwe Ebili
Isandla esifaka phakathi amaKong amabili angadalulwanga.
35. Iladi elixutshiwe
Iqonde (amathayili kusuka ku-1 kuye ku-9) akhiwa nguChis wamasudi amathathu. Ingahlanganiswa neTodo Chi.
Isandla sakhiwe izinhlanganisela ezakhiwe ngamathayili amile ngokuvundlanayo (okusho ukuthi, yilezo tile ezibukeka ubuso obufanayo zibheke phezulu futhi zibheke phansi: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 wama-Discs, 2, 4, 5, 6 , 8, 9 weBambúes ne-White Dragon). Iphuzu lomndeni ongekho lifakiwe.
37. I-Triple Chi ixubekile
Isandla esineChis ezintathu ezilinganayo, kodwa amasudi ahlukile.
38. IPungungwe Emithathu Exutshiwe
Isandla siqukethe ama-Pung noma i-Kong amathathu, ngalinye lesudi ehlukile nenombolo enkulu kunePung yangaphambilini.
39. Isandla Esingenalutho
Isandla esingenamaphuzu. Amaphuzu wezimbali awabaleli ukuthola leli banga. Izimbali zengezwa ngemuva kwamaphoyinti ayi-8 ukuze zinqobe.
Ukuvala, ngokwesibonelo, ngokulahla okungu-3 kwe-Bamboo (kungabi ucezu lokugcina lwesi-3), futhi kungabi yisandla esifihliwe noma isandla esiveziwe. Ngakho-ke kugcwaliseka ukuthi akuyona i-All Chi, noma i-All Pung, awekho amaphuzu we-Wait, noma i-Pung of Terminals noma i-Honours, noma i-Last Token, njll.
40. Ithebhu Lokugcina Lodonga
Vala ngethayela lokugcina odongeni. Ayikwazi ukuhlanganiswa nokuthi Vala Udonga.
41. Lahla Uphawu Lokugcina Lodonga
Vala ngokulahla ithayili lokugcina odongeni.
42. Vala nge-Extra Kong Token
Vala ngethokheni eyengeziwe ethathwe ngemuva kokuthola i-Kong.
43. Ukuphanga KweKong
Vala ngethokheni eyebiwe kumdlali adlule ngayo esuka ePung eveziwe eya eKong. Ayikwazi ukuhlanganiswa Nesandla Esifihlwe Ngokuphelele.
Imidlalo yamaphoyinti ama-12
44. Amathokheni Athungwe Ngezihlonipho Ezimbalwa
Isandla esenziwe ngala tile elandelayo: ama-5 noma ama-6 ama-Honours (awabhangqiwe) kanye ne-subset yamathayili ayi-8 noma ayi-9. Ngamathokheni we-7 Honours, umdlalo ubizwa ngokuthi ama-Sewn Tokens nge-Great Honours. Isandla kufanele sifihlwe, yize kungadingeki ukuthi sifihlwe ngokuphelele, okungukuthi, ithayili elilahliwe lingadonselwa ukuvala. Ayikwazi ukuhlanganiswa nayo Yonke Imindeni noma Isandla Esifihlekile.
45. Amathokheni Athungiwe
Ukudlala okukhethekile okuqukethe amachips 1-4-7 wesudi eyodwa, 2-5-8 yenye isudi no-3-6-9 wesudi yesithathu. Isandla akudingeki ukuthi sifihlwe (kusobala ukuthi ukulahlwa kungadonselwa ngaphandle kokuthi kuvalwe inhlanganisela yesine, hhayi okwenziwe ngamathayili athungiwe). Ingahlanganiswa neTodo Chi.
46. ​​Ophakeme 4
Isandla esinezichips 6 kuya ku-9 kuphela.
47. Osezansi 4
Isandla esinezichips 1 kuya ku-4 kuphela.
48. Imimoya Emikhulu Emithathu
Isandla sihlanganisa i-3 Wind Pung noma i-Kong.
Imidlalo yamaphoyinti ama-16
49. Izitebhisi ezihlanzekile
Isandla esakhiwe nge-1-9 eqondile yamachips wesudi efanayo, akha ama-Chis amathathu alandelanayo.
50. U-Extreme Chis wemindeni emithathu
Isandla esiqukethe ama-Chows 1-2-3 no-7-8-9 wesudi eyodwa, ama-Chows 1-2-3 no-7-8-9 enye isudi namabili ama-5 wesudi yesithathu esele. Amaphuzu we-Mixed Double Chi, i-Two Terminal Chis, i-No Honours ne-All Chi asevele efakiwe.
51. Abathathu Abamsulwa Abanyathelwe uChis
Isandla esakhiwe ngamaChis amathathu ngesudi efanayo, ngalinye linesiqeshana sokuqala esiqala ngenombolo noma amabili amakhulu kunesiqeshana sokuqala kweChi, kodwa hhayi inhlanganisela yazo zombili (okungukuthi, noma amaChis amathathu anezicucu zokuqala isikhawu sinye noma bonke abathathu oChis basesikhaleni sesibili).
52. Konke nge 5
Isandla lapho yonke inhlanganisela ifaka phakathi u-5 (kufaka namabhangqa).
53. I-Mixed Pung Pung
Isandla esinePung (noma iKong) ezintathu ezilinganayo, kepha isudi ngayinye ehlukile.
54. IPhungwana Emithathu Efihliwe
Isandla esifaka amaPungs amathathu angachazwanga (iKong efihlekile ayibaliwe).
Imidlalo yamaphoyinti ama-24
55. Amabili Amabili
Isandla sakhiwa ngamabhangqa ayisikhombisa ama-chips. Kuhlala njalo ngokulinda okulula. Ithayela elilahliwe lingadonswa ukuqeda umdlalo. Ayikwazi ukuhlanganiswa ne-All (Pung of) Pairs, Hand Hidden, noma i-Simple Hold hands. Ingahlanganiswa nayo Yonke Imindeni, Isandla Esifihliwe Ngokuphelele, Ithokheni Elibekiwe, Akukho I-Honours, Konke Okulula, 1 Umndeni Olahlekile, Wonke AmaTheminali, noma i-All Honours.
56. Amathokheni Athungwe Ngokuhlonishwa Okukhulu
Isandla esenziwe ngakunye kwama-Honours ayisikhombisa (ngaphandle kokuphindaphinda) namathayili avela kumasudi amathathu akha ukulandelana kwakho kwamathayili ayisikhombisa Ahlanganisiwe (okusho ukuthi, anama-tile ayisikhombisa kulawa ayisishiyagalolunye akha isandla samathayili ahlanganisiwe: amathayili 1- U-4-7 wesudi eyodwa, u-2-5-8 wesinye isudi no-3-6-9 wesudi yesithathu). Isandla kumele sifihlwe. Ayikwazi ukuhlanganiswa nezandla: Yonke Imindeni, Isandla Esifihliwe noma Ukulinda Okulula.
57. Bonke Ontanga (Yonke Inzondo Yontanga)
Isandla esakhiwe yi-Pung yamathayili ngisho (kufaka namabili). Amaphuzu we-All Pung, No Honours nawo wonke ama-Simple asevele afakiwe. Ingahlanganiswa ne-Absent Family noma i-Pure Hand.
58. Isandla Esimsulwa
Isandla esinezichips zesudi efanayo futhi ngaphandle kwamaHonours. Amaphuzu avela esandleni seNo Honours afakiwe.
59. Ngokufana Triple Chi
OChis abathathu abalinganayo nabesudi efanayo. Ayikwazi ukuhlanganiswa nesandla se-Pure Consecutive Pung.
Imidlalo yamaphoyinti ama-32
60. I-Pung emithathu elandelanayo ihlanzekile
Nikeza ama-Pung amathathu (noma ama-Kong) amasudi afanayo, ngalinye linenombolo ephakeme kunaleyo edlule. Ayikwazi ukuhlanganiswa ne-Triple Chi Identical.
61. Amathebhu aphezulu
Isandla esinezinhlanganisela zamathayili 7, 8 no-9 (kufaka namabili). Amaphuzu we-No Honours afakiwe. Ingahlanganiswa ne-All Pung, i-Absent Family noma i-Pure Hand.
62. Amathebhu Amaphakathi
Isandla esinezinhlanganisela zamathayili 4, 5 no-6 (kufaka namabili). Amaphuzu we-No Honours afakiwe. Ingahlanganiswa ne-All Pung, i-Absent Family noma i-Pure Hand.
63. Amathebhu Angaphansi
Isandla esinezinhlanganisela zamathayili 1, 2 no-3 (kufaka namabili). Amaphuzu we-No Honours afakiwe. Ingahlanganiswa ne-All Pung, i-Absent Family noma i-Pure Hand.
64. Abane Abamsulwa Abanyathelwe uChis
Isandla samaChis amane wesudi efanayo, ngayinye enezicucu zokuqala yamangaza inombolo eyodwa noma ezimbili maqondana nesiqeshana sokuqala seChi.
Imidlalo yamaphoyinti ama-48
65. IKong Kong ezintathu
Isandla esifaka phakathi ezintathu zeKong. Zingafihlwa noma ziboniswe.
66. Konke ukuhlonishwa namatheminali
Isandla esiqukethe amaTheminali ngokuphelele (izibali 1 no-9) kanye neHonours (Winds and Dragons). Awekho amaphuzu angeziwe avunyelwe kwimidlalo eyisisekelo yeMimoya namaTheminali. Amaphuzu we-All Pung, i-Terminal Pung ne-Honors Pung afakiwe. Ingahlanganiswa neSemi Pure Hand, Absent Family, Dragons Two, Three Little Dragons, Three Great Dragons, Three Winds, Four Little Winds noma ezine Great Winds.
67. Quadruple Chi Ngokufanayo
Isandla esakhiwe ngo-Chis abane abalinganayo ngesudi efanayo. Amaphuzu we-Pure Staggered Pung, i-Hoard Token, ne-Pure Double Chi afakiwe.
68. AmaPungs amane Ahlanzekile Alandelanayo
Isandla esifaka phakathi ama-Pung amane noma i-Kong yesudi efanayo, ediyazela eyodwa.
70. Imimoya Emincane Emine
Isandla esifaka phakathi ama-Pung (noma i-Kong) amathathu e-Winds kanye ne-Wind esele. Ingahlanganiswa ne-Dominant Wind ne-Own Wind. Amaphuzu amathathu we-Great Winds afakiwe.
71. Amadragoni Amathathu Amancane
Isandla esifaka phakathi amaPung (noma amaKong) amabili amaDragons, kanye nelinye iDrako. Amaphuzu ngePung ngayinye yamaDragon ngamanye awabalwa.
72. Konke Ukuhlonishwa
Isandla senziwe ngokuphelele ngamaHonours (Winds kanye / noma amaDragons). Ingakhiwa nge-Pung noma i-Kong, ifihliwe noma ikhonjiswe. Ingahlanganiswa neDrag Pung. Amaphuzu weTodo Pung afakiwe.
73. Iphango Elifihliwe Eline (Igugu Elifihlekile)
Isandla esifaka phakathi iPung (noma iKong) engachazwanga. Ayikwazi ukuhlanganiswa Nesandla Esifihlwe Ngokuphelele noma i-All Pung.
Isandla sakhiwa ngama-Lower Chis (1-2-3) amabili, ama-Upper Chis (7-8-9) nama-pair ama-5, wonke amasudi afanayo. Amaphuzu weSandla Esihlanzekile, Amabhangqa Ayisikhombisa, ama-Chow Terminating nePure Double Chow afakiwe.
Imidlalo yamaphoyinti ama-88
75. Imimoya Emikhulu Emikhulu
Isandla esakhiwe nguPung (noma uKong) weMimoya emine. Ayikwazi ukuhlanganiswa ne-All Pung noma i-Wind Dominant noma i-Self Wind Pung.
76. AmaDragoni Amakhulu Amathathu
Isandla esakhiwe nguPung (noma uKong) wamaDragons ama-3. Ayikwazi ukuhlanganiswa ne-Dragon Pung.
77. Konke okuluhlaza okotshani
Isandla sakhiwe ngamathayili we-Bamboo angu-2, 3, 4, 6, 8 futhi, ngokuzikhethela, ama-Green Dragons. Ingahlanganiswa ne-Pure Hand, i-Semi Pure Hand (uma kusetshenziswa ama-Dragons amaGreen), ama-7 Pairs, Isandla Esifihlekile Ngokuphelele, I-All Pung noma i-All Simple.
78. Iminyango Eyisishiyagalolunye
Isandla esakhiwe ngamashipsi 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9-XNUMX wesudi efanayo, okwenza i-pair nganoma iyiphi yazo. Isandla kumele sifihlwe. Ayikwazi ukuhlanganiswa ne-Hidden Hand, Pure Hand, noma ama-Terminals ne-Honors Pung. Ingahlanganiswa Nesandla Esifihlwe Ngokuphelele.
79. IKong Kong ezine
Noma yisiphi isandla esine-4 Kong. Zingafihlwa noma zivezwe.
80. Amabhangqa Ayisikhombisa Alandelanayo Alandelanayo
Isandla esakhiwe ngamabhangqa ayisikhombisa wamashipsi wesudi efanayo isibalo saso sibhajwe ngoyedwa. Ayikwazi ukuhlanganiswa ne-Pure Hand, Isandla Esifihlekile Ngokuphelele noma i-Simple Wait.
81. Izintandane eziyishumi nantathu
Isandla sakhiwe ngamathayili 1 no-9 we-Bamboos, 1 no-9 wama-Discs, 1 no-9 wezinhlamvu, kanye ne-Honours ngayinye kweziyisikhombisa. Lo mbhangqwana wenziwe nganoma yimaphi ama-chips. Ithayela elilahliwe lingadonswa ukuqeda umdlalo. Ayikwazi ukuhlanganiswa ne-Pure Hand, Isandla Esifihlekile Ngokuphelele noma i-Simple Hold.
Uma umdlali enza iphutha lapho ememezela i-Chi, i-Pung, i-Kong noma ethatha ithokheni ezongena esikhundleni, ulahlekelwa yilungelo lokuwina umdlalo (isandla esifile), yize ungaqhubeka nokudlala, webe ukulahlwa, njll.
Abadlali abakwazi ukucela ukulahlwa bese beguqula umqondo wabo. Ngesikhathi sokuqala uzokwaziswa, okwesibili kuzoba njalo ujezisiwe con Amaphuzu we-5 (okuzokhokhelwa umdlali ngamunye), owesithathu Amaphuzu we-10, owesine Amaphuzu we-20, njalo njalo.
Ukuthinta uthayela wasodongeni ngaphambi kokuba umdlali owedlule alahlwe kuthathwa njengokweqile. Ngesikhathi sokuqala uzokwaziswa, okwesibili kuzoba njalo ujezisiwe con Amaphuzu we-5 (okuzokhokhelwa umdlali ngamunye), owesithathu Amaphuzu we-10, owesine Amaphuzu we-20, njalo njalo.
Uma ngabe uphawu aluzange lubonwe, luzoshiywa lapho lwalukhona. Uma ithokheni ibonisiwe, umdlali ngeke akwazi ukuwina lowo mdlalo (isandla esifile), yize ungaqhubeka nokudlala, webe ukulahlwa, njll.
Cela uPung ngokubambezeleka
Cela ithokheni ye-Pung enokuningi kunoku Imizuzwana engu-3 ukubambezeleka kubhekwa njengephutha. Ngesikhathi sokuqala uzokwaziswa, okwesibili kuzoba njalo ujezisiwe con Amaphuzu we-5 (okuzokhokhelwa umdlali ngamunye), owesithathu Amaphuzu we-10, owesine Amaphuzu we-20, njalo njalo.
I-Mahjong yamanga (i-Fal Hu)
Uma umdlali enayo ngaphansi kwamaphoyinti ayi-8 kumele ukhokhe Amaphuzu we-10 kumdlali ngamunye futhi uzoba nayo isandla esifile, yize ekwazi ukuqhubeka nokudlala, entshontsha ukulahlwa, njll.
Uma umdlali ayihlangabezani nezimfuneko ukwenza iMahjong ngokulahla (unamathayili angaphezu kuka-14 noma ngaphansi kuka-14, yenza iphutha ngothayela ovalayo, njll.), kufanele ukhokhe Amaphuzu we-20 kumdlali ngamunye futhi uzoba nayo isandla esifile, yize ekwazi ukuqhubeka nokudlala, entshontsha ukulahlwa, njll.
Futhi, konke ama-chips akhonjisiwe ngummemezeli weMahjong yamanga kufanele ilahlwe kumdlali olandelayo uyaphenduka.
Konke ithebhu ibonisiwe ngumdlali (iwa lapho eyiba odongeni, uyiphonsa phakathi kwamashipisi esandleni sakhe, njll.) kufanele ilahlwe ejikeni elilandelayo lomdlali.
Esimweni lapho umdlali bonisa wonke ama-chips akho lapho omunye umdlali ememezela iMahjong wenza iphutha. Uma ekugcineni umdlali omemezele iMahjong win, umdlali okhombise ama-chips akhe uzoba welulekile.¿ Ngabe omunye umdlali akawini? Kumele aphonse amachips abonisiwe kunye ngakunye.
Uma umdlali lembula ifayela lomunye, kufanele ukhokhe umdlali olimele phakathi 5-60 amaphuzu kunqunywe ngunompempe (ozophinde anqume ukuthi uyaqhubeka yini umdlalo noma cha).
Inombolo engavumelekile yamathokheni
Uma umdlali enezingqimba ezingaphansi kwezingu-13 noma ngaphezulu kwezingu-13 phakathi kokushintshana, unakho isandla esifile, yize ekwazi ukuqhubeka nokudlala, entshontsha ukulahlwa, njll.